“Fa manana izao rakitra izao amin’ny vilany tany izahay, mba ho an’Andriamanitra ny halehiben’ny hery, fa tsy ho avy aminay”. 2 Kôr. 4:7
Izay fahatsarana ananan’ny olona rehetra dia fanomezan’Andriamanitra avokoa; ny asa tsara ataon’izy ireo dia vokatry ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kristy. Satria tokony hanohitra ny zavatra rehetra amin’Andriamanitra izy ireo, ny voninahitr’izay maha-izy azy rehetra na izay ataony dia Azy irery ihany, izy ireo dia fitaovana eo am-pelatanan’Andriamanitra fotsiny ihany.
Manoatra noho izany – toy ny lesona rehetra avy amin’ny tantaran’ny Baiboly – dia zava-doza mahavery ny mankalaza na manindrahindra olombelona; satria raha misy manomboka tsy mahita ny fiankinany tanteraka amin’Andriamanitra , ka matoky amin’ny herin’ny tenany, dia azo antoka fa ho lavo izy. Ny olona dia mitolona amin’ny fahadalana izay mahery noho izy (...). Tsy azo heverina akory ho antsika, raha amin’ny herin’ny tenantsika, ny hiatrika izany fifandirana izany; ary na inona na inona manintona ny saina hiala amin’Andriamanitra , na inona na inona mitarika ho amin’ny fideran-tena na ny fahavitan-tena , dia azo antoka fa manomana ny lalana ho amin’ny fahalavoantsika. Ny fampitandreman’ny Baiboly dia ny fandraràna mafy ny fitokiana amin’ny herin’olombelona ary fampirisihana ny fitokiana amin’ny hery avy any ambony.
Tsy naniraka anjely avy any an-danitra mba hitory ny famonjena ho an’ny taranak’olombelona Andriamanitra . Nosokafany tamintsika ireo fahamarinana sarobidin’ny Teniny ary namboleny tao am-pontsika mba hahafahantsika manome izany ho amin’ireo izay ao anatin’ny haizina; Raha toa ka tena nanandrana ny tsiron’ireo fanomezana sarobidin’Andriamanitra tao amin’ny fampanantenany isika, dia tokony hizara izany fahalalana izany amin’ny hafa koa (...).
Tokony hiasa isam-batan’olona isika toy ny hoe misy andraikitra lehibe napetraka amintsika. Tokony haneho tanjaka tsy mety reraka sy fahaiza-mifandray ary zotom-po isika ao amin’ity asa ity ka hitondra ny enta-mavesatra , hahatsapa ny loza mitatao eo amin’izay itoeran’ireo namana sy mpiara-monina amintsika. Tokony hiasa toy izay niasan’i Kristy isika. Tokony haneho ny fahamarinana toy izay niasan’i Kristy isika. Tokony haneho ny fahamarinana toy izay maha-izy azy ao amin’i Jesosy isika, mba tsy ho eo amin’ny ankanjontsika ny ran’ireo fanahy ireo; Ao anatin’izany koa dia tokony hahatsapa fiankinana sy fahatokiana tanetraka an’Andriamanitra isika, satria fantantsika fa tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy misy ny fahasoavany sy ny heriny manampy. Mety hisy Paoly iray hamboly, sy Apôstôly iray hanondraka, saingy Andriamanitra irery no afaka mampitombo.
Ny adidintsika, ny fiarovana ho antsika, ny fiadanana sy ny mahatsinontsinona antsika , ary ny famonjena antsika dia miantso antsika tsirairay mba hampiasa ny fahamalinana lehibe indrindra hihazonana ny fahasoavan’i Kristy.